▷ Maxay ku fiican tahay Google's " muraayadaha tarjumaada"? - 【 Isbarbardhigga】 2022
Google ayaa ku jeesjeesay muraayadaha turjumaada shirkii horumarinta Google I/O ee usbuucii hore, adiga oo balan qaaday in maalin uun aad awoodi doonto inaad la hadasho qof ku hadla luqad qalaad oo aad ku aragto turjumaada Ingiriisiga ookiyaalahaaga.
Madaxda shirkadda ayaa muqaal muqaal ah ku tusay muraayadaha; kaliya ma muujin "qoraal xidhan" (qoraalka dhabta ah ee qeexaya isla luqadda waxa uu qof kale sheegayo), laakiin sidoo kale turjumaadda Ingiriisi iyo Mandarin ama Isbaanishka, taas oo u oggolaanaysa dadka ku hadla laba luqadood oo kala duwan. sii wada hadalka. iyadoo u ogolaanaysa isticmaalayaasha maqalka naafada ah inay arkaan waxa dadka kale ay u sheegayaan.
Qalabka Turjumaada Google ahaan, muraayadaha ayaa xallin doona dhibaatada weyn ee isticmaalka Google Translate, taas oo ah: haddii aad isticmaasho tarjumaada maqalka, tarjumaada maqalka ayaa carqaladaynaysa wada hadalka wakhtiga dhabta ah. Markaad u soo bandhigto tarjumaada muuqaal, waxaad si fudud oo dabiici ah ula socon kartaa wada sheekaysiga.
Si ka duwan sida Google Glass, nooca muraayadaha tarjumaada sidoo kale waa la kordhiyey xaqiiqada (AR). Aan sharaxo waxaan ula jeedo.
Xaqiiqada la kordhiyey waxay dhacdaa marka qalabku uu qabto xogta aduunka oo ku salaysan aqoonsiga macnaha xogtaas, ku daro macluumaadka uu heli karo isticmaaluhu.
Muraayadaha Google ma ahayn xaqiiqo la kordhiyey, waxay ahayd bandhig kor u kaca ah. Wacyigelinta macnaha guud ama deegaanka ee uu wax ka qaban karayey waxay ahayd goobta. Iyadoo ku xiran goobta, waxay ku siin kartaa jihooyin-ka-jeedin ama xusuusin ku saleysan goobta. Laakin sida caadiga ah ma ururin karto xogta muuqaalka ama maqalka ka dibna u soo dirto jawaab celin isticmaalaha waxa ay arkayaan ama maqlayaan.
Muraayadaha Turjumaada Google waa, dhab ahaan, AR iyagoo qaadaya xogta maqalka ah ee deegaanka una soo diraya isticmaalaha qoraal ah waxa lagu sheegay luqadda ay doorteen.
Xubno ka tirsan dadweynaha iyo saxaafadda farsamada ayaa sheegay in shaqada tarjumaaddu ay tahay adeegsiga muraayadahaas gaarka ah iyada oo aan wax lafagurayn ama sahaminta muhiimka ah, inta aan ogahay. Xaqiiqda ugu cad ee ay ahayd in lagu xuso warbixin kasta ayaa ah in tarjumaaddu ay tahay kaliya doorasho aan loo meel dayin oo loogu talagalay habaynta maqalka daruuraha. Waxa jira muraayado badan oo kale oo samayn kara!
Waxay si fudud u habayn karaan maqal kasta codsi kasta waxayna u soo celin karaan qoraal kasta ama maqal isticmaaluhu si uu u isticmaalo. Ma cadda?
Xaqiiqda, qalabku wuxuu u diraa qaylada daruuraha wuxuuna soo bandhigayaa qoraalka ay soo celisay daruurtu. Waa intaas ookiyaaleyaashu. Soo dir buuq Aqbal oo muuji qoraalka
Codsiyada habaynta maqalka iyo falcelinta macnaha guud ama warcelintu waa kuwo aan xad lahayn. Muraayadaha ayaa soo diri kara buuq kasta ka dibna waxay soo bandhigi karaan qoraal kasta oo uu soo celiyo abka fog.
Sawaxanka xitaa waa la ruxruxi karaa, sida modem duug ah. Qalabka buuqa dhaliya ama app-ka casriga ah waxa uu soo diri kara dhawaaqyo u eg R2D2 iyo foori, kaas oo lagu farsamayn karo daruuraha sidii koodka QR ee maqalka ah kaas oo, marka loo tarjumo adeegayaasha, soo celin kara wixii macluumaad ah ee lagu soo bandhigo muraayadaha. Qoraalkani wuxuu noqon karaa tilmaamo lagu hawlgalinayo qalabka. Waxay noqon kartaa macluumaad ku saabsan farshaxan gaar ah oo ku yaal matxafka. Waxay noqon kartaa macluumaad ku saabsan badeecad gaar ah oo dukaanka taal.
Kuwani waa noocyada codsiyada aan fileyno AR muuqaal ah shan sano ama ka badan. Dhanka kale, inteeda badan waxaa lagu samayn karaa maqal.
Isticmaalka cad ee awoodda leh ee Google's "Muraayadaha Turjumaada" waxay noqon doontaa in lagu isticmaalo Google Assistant. Waxay la mid tahay isticmaalka muqaal caqli badan oo leh Google Assistant, qalab bixiya xog muuqaal ah, iyo sidoo kale xogta maqalka caadiga ah, ee codsiyada Kaaliyaha Google. Laakiin xogtaas muuqaalku waxay ahaan doontaa muraayadahaaga, gacmo-la'aan, meel kasta oo aad joogto. (Taasi waxay noqon doontaa abka bandhiga ogeysiiska, halkii ay ka ahaan lahayd AR.)
Laakin qiyaas haddii " muraayadaha tarjumaadda" lagu xiray taleefan casriga ah. Ogolaansho ay bixiyeen kuwa kale, gudbinta xogta xiriirka ee Bluetooth waxay muujin kartaa ( muraayadaha) cidda aad kala hadlayso dhacdo shaqo, iyo sidoo kale taariikhdaada iyaga.
Waa maxay sababta saxaafadda tignoolajiyadu u jabisay Google Glass
Dib-u-eegayaasha Google Glass waxay dhaleeceeyeen badeecada, badiba laba sababood. Marka hore, kamarad hore oo koofiyad ku rakiban ayaa dadka dhibsatay. Haddii aad la hadlaysay malaha Google Glass, kamarada ayaa si toos ah adiga laguu soo taagay, taas oo ka dhigaysa in aad la yaabto in lagu duubay iyo in kale. (Google ma aysan sheegin in "Muraayadaha Turjumaada" ay yeelan doonaan kamarad, laakiin prototype ayaa sameeyay.)
Marka labaad, walxaha xad-dhaafka ah iyo kuwa muuqda ayaa ka dhigay dadka isticmaala inay u egyihiin cyborgs.
Isku darka labadan xadgudubyada agabka ah ayaa horseeday dhaleeceynta in Google Glass uusan ahayn mid bulsho ahaan la aqbali karo shirkad wanaagsan.
Google's "Translation Glasses", dhanka kale, ma laha kamarad umana eka kuwa lagu beero cyborg- waxay aad ugu eg yihiin muraayadaha caadiga ah. Qoraalka ka muuqda isticmaaluhuna maaha mid u muuqda qofka aad la hadlayso. Waxay u egtahay inay indhaha isku qabtaan.
Meesha kaliya ee ka hartay ee aan la aqbali karin bulsheed ee Google's " muraayadaha tarjumaadda" waa xaqiiqda ah in Google uu asal ahaan "duubi doono" erayada dadka kale fasax la'aan, u gelin doona daruuraha si ay u tarjumaan, oo malaha u xafido erayadaas. codadka. Alaabooyinka la xidhiidha.
Weli, shayku waa in xaqiiqada la kordhiyay iyo xitaa bandhigyada kor-u-qaadista ay yihiin kuwo aad u xiiso badan, haddii wax-soo-saarayaashu ay heli karaan astaamaha saxda ah. Maalin maalmaha ka mid ah waxaan haysan doonaa AR muuqaal buuxa oo muraayadaha caadiga ah. Dhanka kale, muraayadaha AR ee wanaagsan waxay yeelan doonaan sifooyinka soo socda:
Waxay u eg yihiin muraayadaha caadiga ah.
Waxay aqbali karaan muraayadaha wax lagu saxayo.
Kamarad ma haystaan.
Waxay ku farsameeyaan codka AI waxayna xogta ku soo celiyaan qoraal.
oo ay bixiyaan shaqaynta caawiye, ku soo celinta natiijooyinka qoraal.
Ilaa hadda, alaabtan oo kale ma jiraan. Laakiin Google ayaa muujisay in ay haysato tignoolajiyada lagu sameeyo.
In kasta oo qoraal-hoosaadyada iyo tarjumaadda luqadda ay noqon karaan sifada ugu soo jiidashada badan, waa, ama waa inay noqotaa, faras Trojan ah oo loogu talagalay codsiyo kale oo ganacsi oo soo jiidasho leh.
Google ma aysan shaacin goorta, ama xitaa haddii, "Muraayadaha Turjumaada" ay u soo rari doonaan alaab ganacsi ahaan. Laakiin haddii Google uusan samayn iyaga, qof kale ayaa sameyn doona, taasina waxay noqon doontaa qaybta dilaaga isticmaaleyaasha ganacsiga.
Awoodda muraayadaha caadiga ah si ay kuu helaan natiijooyinka muuqaalka ah ee tarjumaadda AI ee cidda iyo waxa ay dhegaysanayso, iyo sidoo kale natiijooyinka muuqaalka iyo maqalka ee weydiimaha kaaliyaha, waxay noqon doontaa beddelka ciyaarta.
Waxaan ku jirnaa waqti adag horumarinta tignoolajiyada halkaasoo apps-ka AR ay u badan yihiin sida apps-ka casriga ah (meesha aysan ka tirsanayn) inta aan sugayno muraayadaha mobilada ee AR-ga oo ay sanooyin badan naga maqan yihiin.
Dhanka kale, xalku waa cad yahay: waxaan u baahanahay muraayado maqal ah oo udub dhexaad u ah AR kuwaas oo qabta codka iyo muujinta ereyada.
Tani waa dhab ahaan waxa Google uu muujiyay.